National News – Page 383 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
सहमतिबाट नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरू असफल, बहुमतीयको तयारी सुरु
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार मुख्य साझेदार माओवादी केन्द्रको अविश्वासको प्रस्तावका कारण ढलेपछि सुरु भएको सहमतीय सरकार निर्माणको प्रयास असफल भएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि दिएको एक साताको समय आइतबार सकिन लागेपनि संसदवादी दलहरु सहमतिमा सरकार गठन गर्न असफल बनेका हुन् । आइतबार बिहान शीतल निवासमा […]
औषधिसहितको स्वास्थ्य टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा
लहान । बाढीबाट प्रभावित सप्तरीका विभिन्न गाविसमा महामारीको संक्रमण फैलने डरका कारण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयले औषधी सहितको टोली परिचालन गरेको छ । केही दिनअघिको अविरल वर्षासँगै विभिन्न नदीमा आएको बाढीका कारण डुबानमा परेको सप्तरीको सकरपुरा, लौनियाँ, तिलाठी, रम्पुरा मल्हनियाँलगायतका गाविसमा आवश्यक औषधिसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको हो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न रोगको संक्रमण बढेर […]
श्रीमती हत्याको आरोपमा श्रीमान् र सासू पक्राउ
पर्सा । श्रीमती हत्याको अभियोगमा पर्सा प्रहरीले श्रीमान् र सासूलाई पक्राउ गरेको छ । पर्साको भेडियाही–९ गदियानी टोल निवासी रमावती देवीको हत्या अभियोगमा उनका श्रीमान् परमा मण्डल र सासू गदनीदेवी मण्डललाई पक्राउ परेका हुन् । बीस वर्षीया श्रीमती रमावती देवीको शव घर नजिकै रहेको नागेश्वर साह तेलीको खेतमा गाडेको अवस्थामा शुक्रबार साँझ बरामद भएपछि श्रीमान् […]
मकवानपुरमा बस दुर्घटना, ९ जनाको मृत्यु, ३१ घाइते
हेटौंडा । मकवानपुरको मनहरी–३ स्थित रमनटारमा आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा परी ९ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंबाट गाइघाटर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ५०५५ नम्बरको बस र काँकडभिट्टाबाट काठमाडौ आइरहेको ना. ५ ख ४०६४ नम्बरको बस आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी ६ जनाको घटनास्थलमै, दुई जनाको अस्पताल लैजाने क्रममा र […]
बस दुर्घटनामा पूर्व-राज्यमन्त्रीसहित ९ को मृत्यु
धनकुटा । तेह्रथुमबाट धनकुटा हुँदै धरान जादै गरेको यात्रुबाहक बस धनकुटामा पर्दा ९ जनाको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको छ । आज अपरान्ह सवा १२ बजे बा २ ख ७३६६ नम्बरको बस सडकबाट करिब डेढ सय फिट तल खस्दा अन्य २ दर्जन भन्दा बढि यात्रु घाइते भएका छन् । बस धनकुटाको परेबादिन भन्ने स्थानबाट करिब दुईसय […]
मनमोहन मेमोरियल कलेजमाथि राजनीति नगर्न डा. भोला रिजालको चेतावनी
काडमाडौं । प्राइभेट मेडिकल कलेज असोशियसनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले मनमोहन मेडिकल कलेजमाथि राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका छन् । सबैलाई पुग्ने गरी सरकारी मेडिकल कलेज वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुले शिक्षा दिन नसक्ने भएकाले प्राइभेट कलेजहरु जरुरी भएको जिकिर पनि गरे । प्राइभेट मेडिकल कलेज असोशियसनद्वारा बुधवार बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त […]
प्युठानमा रातभर जागाराम बस्छन् जनता
नेपालभर र विशेष गरी मध्यपश्चिममा अविरल रुपमा परिरहेको वर्षाको सबैभन्दा ठूलो असर प्युठान जिल्लामा परेको छ । आजसम्म त्यहां ३८ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने संयौं अरुहरु उच्च जोखिमको खतरा मोलिरहेका छन् । मानव क्षतिको यति ठूलो संख्या एक हप्ता भित्रको हो । आफ्नो घरआंगन, धनसंपत्ति र लालाबाला छाडेर कहां जानु ? बरु ठूलो बारीको […]
बाढीपहिरोका कारण देशभर ६६ जनाको मृत्यु, १५ बेपत्ता
काठमाडौँ। केही दिनदेखि परेको अबिरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट अहिलेसम्म मुलुकभर ६६ को मृत्यु, ३१ घाइते र १५ जना बेपत्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी बाढीपहिरोको क्षतिबारे जानकारी दिएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिरोका कारण ७६ वटा घर पूर्णरुपमा र दुईवटा घरमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ । […]
कोशी ब्यारेजमा आतङ्कवादी हमलाबारे भारतले गरेकाे पत्राचारबारे क्रान्तिकारी माअाेवादीकाे अापत्ति
कोशी व्यारेजमा आतङ्कवादीहरुको हमलाको खतरा भनी भारतीय पक्षले नेपाललाई गरेको पत्राचारभित्र गंभीर प्रकृतिको आशय लुकेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । यस पालीको सघन वर्षाको कारणले कोशी नदीमा पानीको मात्रा निकै बढेको र नेपाली भूभाग अर्थात् तराइका स्थानीय वासिन्दा लगायत भारतको विहारस्थित स्थानीय जनता […]